Apple Music qaab iyo xadka Devices
Qeybta 1: qaab Apple Music iyo xadka ka ah xeeladdiisa
Qeybta 2: Waa maxay qaababka music Apple qalabka taageerada?
Qeybta 3: Best downloader music -TunesGo - iyo Converter in ay si toos ah mp3
Apple Music waa cajiib adeeg geeyo music taasoo ku siinaysaa inaad hesho malaayiin kuwan raadkaygay ku saabsan qalabka macruufka iyo shaqeeyaa ku salaysan Times. Tani waxay adeeg geeyo music ayaa dhawaan bilaabay iyo tan iyo markaas waxa uu soo jiitay malaayiin users iskutallaabta ka soo adduunka. Madal si kastaba ha ahaatee waxa ay taageertaa kaliya tiro kooban oo ah qaabab music iyo sidoo kale waxa uu leeyahay xad in tirada iyo nooca qalab loo isticmaali karo si ay u helaan. In this article, waxaan oo dhan ku saabsan qaababka ay taageerayaan iyo tirada qalabka loo isticmaali karo waxay u baran doonaan.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Apple Music taageertaa kaliya qaabab file music gaar ah oo ku saabsan aaladaha Apple ah in uu ka shaqeeyaa. Haddii aad tahay iPhone, iPad, iPod taabto, Mac ama PC user markaas waa inaad marka hore u cusbooneysiin Lugood si aad u nooca ugu dambeeya in la sii wado in la isticmaalo music madal Apple ah. Your Mac ama PC leeyihiin waa Lugood 12.1.2 in ay awoodaan in ay ka faa'iideystaan ​​madal music ah. Dhinaca kale, haddii aad tahay iPhone, iPad ama iPod xiriiri user, markaas waa in aad leedahay version cusub ee macruufka taas oo macruufka 8.4 ama wax ka sareeya.
Apple music app hadda waa inay awoodaan inay akhriyaan, diinta iyo qori dhexeeya MP3, regelingen, AIFF, MPEG-4, AAC, iyo qaabab Apple sameecadda ah. Lugood ayaa sidoo kale ka ciyaari kara wax files audio oo QuickTime ciyaari karo iyo waxa ku jira faylasha AAC Badbaadin ka Lugood Store iyo audible.com buugaagta codka ah. Sidoo kale, waa in aad ogaato in ay jirto taageero xaddidan FLAC iyo Vorbis ku jira weel Ogg.
Ka sokow soo degida CD-galay maktabadda Lugood ah, dadka isticmaala sidoo kale ay awoodaan in ay soo dhoofsadaan ee files audio digital ah ilaha kale ee nooc kasta oo qaab oo Lugood taageertaa.
Qeybta 3: Best qaab music converter- TunesGo
TunesGo ka Wondershare waa boosteejo ah oo u suurta galinaya in aad maamusho joogo warbaahinta on qalabka macruufka iyo waxa ka mid wareejiyo kale iyada oo maraya Lugood. Madal Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad kala soo bixi music oo loogu badalo in ay qaabab kale si toos ah.
a) muuqaalada TunesGo
Madal Tani waxay si deg deg ah dhoofisa dhammaan noocyada kala duwan ee files si aad u computer iyo abuuraa gurmad ah ma si in aad walwalo nooc kasta oo ah lumitaanka xogta.
Waxay bixisaa version ah tijaabo lacag la'aan ah oo aad ka iibsan kartaa ruqsad buuxda u ah ee $39.95.
Waxaa la socon kara macruufka 8 iyo taageerada iPhone6 ​​oo dhan versions ilaa iPhone 4s. Waxaa sidoo kale la jaan qaada iPod xiriiri 5, iPod Nano, classic iPod, iPod mini, iPad cusub.
Barnaamijkan ayaa sidoo kale awood u qaadaan tus kasta oo kaliya koobi faylasha in aan meesha joogin maktabadda caga aad.
App Tani ama madal kaa caawin kara inaad dib u dhiska aad idil maktabadda Lugood ka iPhone, iPad iyo iPod, haddii aad soo gaaray nooc kasta oo shil nidaam ama failure.
b) Bar sida loo dhigay qaab music bartilmaameed u ah TunesGo ah
TunesGo user u saamaxaaya in ay bedesho qaab faylka si kuwa kuwaas oo ay taageerayaan qalabka ay. Times ayaa bixisay ee TunesGo sidoo kale awood u aad u dhigay qaab music diirada sida MP3 ama MP4 si ay dhammaan faylasha waxaa lagu badbaadiyey qaab la mid ah. Hoos siiyo waa tallaabooyinka u dhigay qaab bartilmaameedka:
Step1: Bogga guriga ee software-ka ah, u tag ikhtiyaarka ah Settings.
Talaabada 2: Hadda fur fursad u rabtid oo taga si Download tab
Talaabada 3: Hadda ikhtiyaar u dejinta Download Default ka muuqan doontaa oo aad u baahan tahay in ay doortaan ka MP3 ama MP4 sidii fursad u deafulat ah. (Shaashada muujinaysaa MP3 sidii doorasho la doortay). Tubada on OK si loo xaqiijiyo ikhtiyaarka.
> Resource > Music > Apple Music Qaabka iyo Qalabka Xaddid